Imprint - Spielpunkt - Mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Zvese zvinyorwa zvakaburitswa paSpielpunkt.net zvinodzivirirwa nekodzero. Kudhirowa kana kushandiswa kusiri kwepachivande kunoda kubvumidzwa kwekare kweane kodzero.
Muridzi uye munhu ane mutoro wezviri mukati:
Nzvimbo dzemifananidzo, magiraidhi, mavhidhiyo uye manzwi anoshandiswa:
www.accelerated-ideas.com nokuda kwe "Cutting Edge".
Liability nokuti gutsikana
Sevhisi rebasa isu tine mutoro maererano ne § 7 Abs.1 TMG yezviri mukati maro kumativi awa maererano nemitemo yakawanda. Maererano ne § § 8 ku10 TMG, zvisinei, isu semupi webasa redu hatifaniri kutarisa kana tichichengetedza ruzivo rwekunze kana kutarisa mamiriro ezvinhu anoratidza kushanda kwemutemo. Mitoro yekubvisa kana kudzivisa kushandiswa kwemashoko pasi pemutemo wakawanda unoramba usingabatsiri. Mutoro munyaya iyi, zvisinei, zvinongogoneka kubva pazuva rekuziva kwekukanganisa kwakasiyana. Pamusana pekuzivisa kukanganisa kwakakodzera, tichabvisa zvinyorwa izvi pakarepo.
Liability nokuti Links
Chipiro chedu chinosanganisira zvibatanidzi kune dzimwe nzvimbo dzekunze dzevanhu vatatu pane zvatinenge tisingakwanisi kuita. Nokudaro, hatigoni kutora mhaka yezvinhu izvi zviri kunze. Izvo zvakapiwa kana kupa mapeji nguva dzose ane mhosva yezviri mumapeji akabatanidzwa. Maji akabatanidzwa akaongororwa kuti zvigone kutyorwa kwepamutemo panguva yekubatanidza. Zvinyorwa zvisiri pamutemo zvakanga zvisingazivikanwi panguva yekubatanidza. Zvisinei, kugadziriswa kwekugadzikana kwehuwandu hwemaji akabatanidzwa hakusi kunzwisiswa kunze kwechokwadi huri uchapupu hwekukanganisa. Pamusana pekuziva kuputsa, tichabvisa hukama hwakadaro pakarepo.
The kugutsikana uye mabasa pamapeji aya vakasikwa nzvimbo dzaishandisa inozviisa pasi mutemo wekodzero German. Kukopa, fora, kuparadzirwa uye chero mhando kudzvinyirirwa kunze komuganhu Copyright zvinoda rakanyorwa mvumo nemunyori kana musiki. Downloads uye makopi vanobvumirwa chete voga, vasiri zvokutengeserana kushandiswa. Insofar sezvo kugutsikana haisi akasikwa kubudikidza opareta, wekodzero yavose rechitatu. Mipiro yavose rechitatu vanoiswa chiratidzo sezvo vakadaro. Unofanira achiri kuziva Copyright kukanganisa tinokumbira nepanomboratidza. Pamusoro ziviso pamusoro kutyorwa, isu achabvisa kugutsikana pakarepo.